Guddoomiyaha UCID oo sheegay in uu Waraaq u qoray Madaxweyne Rayaale | Somaliland.Org
Guddoomiyaha UCID oo sheegay in uu Waraaq u qoray Madaxweyne Rayaale
September 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa sheegay in uu Warqad Qoraal ah shalay u diray Madaxweyne Rayaale, isla markaana wuxuu tilmaamay in ay jiraan Ergooyin beelaysan oo uu sheegay inay isku dayayaan inay kala xaajoodaan sidii loo dayn lahaa xubnaha ay dalbadeen in la bedelo ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe waxa uu naqdiyay Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waxaanu sheegay inay jiraan Ergooyin beelaysan oo uu sheegay inay isku dayayaan inay kala xaajoodaan sidii loo dayn lahaa xubnaha ay dalbadeen in la bedelo ee Komishanka. “Komishan adagi haddii uu jiro qas maynu galneen, waayo iyaga ayaa laalay natiijadii Diiwaangelinta oo waxan inoogu wacnaa..Walaalayaal halka qabyaaladdu inaga gaadhay, reerihii ay ka dhasheen (Xubnaha Komishanka qaarkood), ayaanu khaatiyaan ka taaganahay oo intay noo yimaadeen Ergo ka socota na leh, waanu isu kiin keenaynaa. Waanu idiin dhaarinaynaa, waxaanu ku nidhi, maxaad noogu dhaarinaysaan, ma tuug Gurigaaga xaday ayaad Gurigaaga ku soo daynaysaa.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha UCID oo xalay ka hadlayay Xaflad Xisbigiisu u qabtay Ardayda Jaamacadaha Hargeysa ka qalin-jebisay.
Faysal Cali Waraabe wuxuu dhaliilay Siyaasadda Xukuumadda Madaxweyne Rayaale ee ku wajahan adeegyada Bulshada ee ay ka mid tahay Caafiimaadku oo uu sheegay inay liidato. Waxaanu intaa ku daray oo uu sheegay in uu shalay Warqad u qoray Madaxweyne Rayaale. “Walaalayaal waxaan idiin sheegayaa in aan Warqad maanta (shalay) u qoray Madaxweyne Rayaale oo aan kaga dalbanayo in aanu kulan isugu nimaadno.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Dunidu maanta way inoo imanaysaa, waayo waxay inoo imanaysaa markay aragtay in aynaan Doorasho qabsan karin oo ay inaga caawinaysaa.”